I-Red Hat Certification Guide - Uhlolojikelele & Izindlela Zomsebenzi | ITS Tech School
Umhlahlandlela Wokuqala Kwabe-Red Hat Certification
#1. I-Red Hat Engineer, Ukuphatha kanye Nezitifiketi Zokuqhafaza
#2. I-Red Hat Certified System Administrator noma i-RHCSA
#3. I-Red Hat Certified Engineer (RHCE)
#4. I-Red Hat Certified Architect
#5. Iziqinisekiso ze-Developer Hat ne-Application Administrator
#6 .Isitifiketi se-Hat Hat nama-Virtualization Administrator
Imisebenzi ehlobene ne-Red Hat ehlobene nemisebenzi
I-Red Hat, igama elihle emigwaqeni ye-IT, linikeza ububanzi obuhlukahlukene bobuchwepheshe ekusebenzeni, kusitoreji, kusekelwe emafini kanye nezinhlelo ezithile zokuvula imithombo evulekile yomngane. Lezi zitifiketi zinezinkinga ezibucayi kakhulu ezingenakwenzeka ezicelo zabo ezinkulu futhi ezihlukene.
Njengamanje, ngaphezu kwe-90% yezinhlangano ze-Fortune 500 ziyakuqonda okuvelele kwalolu hlelo oluvulekile oluvela emithonjeni. Ukusetshenziswa okuphezulu kugcizelela ukubaluleka kwesitifikedi se-Red Hat. Abacwaningi abaqinisekisiwe be-Red Hat bafunwa ngemuva futhi baqashwa yizinhlangano ze-monster ngomzuzwana.
Uma kwenzeka ukuthi lezi zilinganiso kanye nemininingwane ephathelene nokusebenza komsebenzi zandise intshiseko yakho yokucabanga ngalezi zitifiketi? Umqondisi wethu angasiza:
Lesi sitifiketi esihloniphekile, i-Red Hat, sivele sisho izwi elilodwa lokwenza ngcono ukuphathwa nokuthuthukiswa kohlelo kalula. Lezi zitifiketi zihloswe ngokuyinhloko ukuze zihambisane namaphrofayela wombonisi wesistimu, ukwenza abakhiqizi, onjiniyela, nezakhiwo. Ukwengeza kuhloswe ukuphathwa kokusebenza kahle okusetshenziselwa kakhulu kwisisekelo se-IT nokuthatha isisombululo esicindezelayo sokusabalalisa iRHEL (Red Hat Enterprise Linux). Ukuveza abafakizicelo igunya eliqine kakhulu ekusebenziseni i-RHEL, isitifiketi sidinga ukubandakanyeka okukhulu kweqiniso kumadivayisi we-Red Hat nezinqubo. Izisekelo ezifana ne-Innovative Technology Solutions ziqinisekisa ukuthi abafakizicelo bathola okungenani ukuqonda ngezandla kwizinto zangempela ze-Red Hat.
Igama lomkhiqizo livumela ukuqinisekiswa okusemthethweni kwe-Red Hat uma umfakisicelo evala uhlelo lokuqinisekisa futhi aqede ukusekela izandla ezandleni ze-Red Hat. Ukuze uqoqe izindiza ezindizayo ekuhlolweni, i-Red Hat ngokucophelela ilungiselela iphakanyiswa kakhulu.
Ekugcwalisekeni okuphumelelayo kwesitifiketi se-Red Hat, uzogcina ube ngumqeqeshi we-Red Hat oqinisekisiwe. Ngaphandle kokuvuleka okuningi nokukhuphuka kwenkokhelo emangalisayo, uzophela ukubhekwa njengomuntu ovela kuqembu le-Red Hat labantu, iqembu elaziwa ngobuntu balo obuqili. Isiqinisekiso se-Red Hat Linux esivela enhlanganweni enokwethenjelwa singanikeza lokhu konke lokhu.
Isidingo sabakwa-Red Hat abashayeli, abaqashi nabaqambi baphezulu uma kuqhathaniswa namanye amaphrofayela. Uma sibona leso sikhalazo, inhlangano ihambisane nokuhlelwa kwezitifiketi okwenziwe ngokukhethekile kulabachwepheshe njengoba kunjalo. Ukuhlonza okusemthethweni 'i-Red Hat Certified' kungaxhunywe yi-Administrators System, abakhiqizi, Abalawuli be-Virtualization, Abanjiniyela kanye ne-JBoss Administrator, njalonjalo., Ngokudlulisa isitifiketi esibalulekile. Futhi, uzothatha ukulala kwe-Red Hat venture ye-Linux ukucabanga okucabangelayo nokuxilonga.
Kuhlongozwa ukunikeza ukuqinisekiswa kwabaphathi abaphumelelayo, abangakwazi ukudubula kahle eRed Hat. Ngaphezu kwalokho, kubhekwa ukuthutha kokuqala kokuba i-Red Hat Certified Engineer njengoba kubalulekile ukuhlala ku-RHCE Exam. I-EX200, okuyi-150 yokuhlolwa kwamaminithi, kuyadingeka ukuba uvuse i-RHCSA.
Uma kungenzeka ukuthi wenza i-Windows Administration umsebenzi wakho, ezinye izindlela ezikhethwayo ziyizingqinamba zokuphatha i-Administration I (RH124) no-II (RH134). Bese futhi, abancintisana be-Linux yokuphatha bafuna ukuthatha i-RH199 ie Rapid Track Course.
Ayikho imingcele yolwazi nokukhumbula iqiniso elifanayo, i-Red Hat Certified Engineer noma isitifiketi se-RHCE sivele. Yenzelwe ngokuyinhloko abaphathi be-veteran system nabaphathi. Ukuze uthathe lesi sitifiketi, umuntu kumele abe nesitifiketi se-RHCSA. I-RHCE yokulungiselela kusuka ekucatshangweni ukuthi ihlelwe ngokuphelele ngokuvumelana nokuhlelwa kwakho kwamakhono okuqala. Uma kwenzeka ukuthi uyinhloko ye-Windows enohlanganiso lwe-Linux khona-ke izifundo ze-Red Hat System Administration I no-II ziyi-pick yakho efanele.
Khona-ke, ikhanda le-Linux / UNIX elinomsebenzi ongaphezu konyaka owodwa lingaya kwi-RHCSA Course Track Course noma i-RH199 ne-Red Hat System Administration III noma izifundo ze-RH254.
Ukuze ube ngumqeqeshi we-RHCE oqinisekisiwe, kufanele wenze nge-3.5 ihora le-Linux 7 elisuselwa ku-RHCE Exam ephethe ikhodi yokuhlola i-EX300. I-lab-based exhaustive elungiselelwe kusuka egameni elithembekile njenge-Koenig ilungiselelo lizosiza ukusula ukuhlolwa kwesitifiketi ngenye indlela.
Ukuma phakathi kwesitifiketi se-Red Hat esibaluleke kakhulu futhi esibaluleke kakhulu yisitifiketi se-RHCA. Uma ubona ukufaneleka kakhulu nokucela, lokho kubizwa njalo ngokuthi isitifiketi se-Red Hat unit. I-RHCE noma i-RHCJD yizidingo zangaphambi kwalesi siqinisekiso.
Abancintisana bangakhetha phakathi kwamakilasi akhona, ngenkathi beya ku-RHCA:
I-Platform yohlelo lokusebenza
Ezinikezwa ochwepheshe be-JBoss Enterprise Middleware Application Platform, lesi saziso sifike ku-assortments ezimbili:
I-JBoss Developer - i-RHCJD
I-JBoss Administrator - I-RHCJA
Abantu abazosebenza ku-Java Enterprise Edition (JEE) izicelo bangahamba ngesitifiketi se-RHCJD. Bese futhi, abantu abanomsebenzi wokwethulwa nokuqapha i-Red Hat JBoss Enterprise Isicelo bangahamba ngesitifiketi se-RHCJA.
Ukuze kuhlanganiswe ifu, inhlangano inikeza isitifiketi se-Virtualization Administrator, eceleni kwesitifiketi sefu. Ochwepheshe abanolwazi olujulile nolwazi oluhlobene ekusetshenzisweni kwezingqalasizinda ze-virtualization, abakwa-hosts, nezivakashi ezisebenzisa i-Red Hat Enterprise Virtualization zingaya kulesi saziso.
Njengoba sesivele sitshele ukuthi yonke inhlangano yokushayela i-Fortune 500 idlulisela phambili ukuthuthuka kweRot Hat kanye nokuhlelwa kwemithombo evulekile, akusikho isidumbu sokuthi kuchwepheshe be-Red Hat abaqinisekisiwe. Abaphathi be-Red Hat System nabanjiniyela bezinhlelo ze-Linux yizinkambiso zomsebenzi ezijwayelekile kunazo zonke zezazi ze-Red Hat.
Ukusakaza kwe-Red Hat Linux yindlela entsha eqhubekayo futhi inamba eqhubekayo yezinhlangano ixazululwa ngalokhu. Ehlanganiswe nokufunda ama-initiator, i-ISCSI, i-Internet Small System System Interface (ISCSI), ama-static design design kanye ne-system management, isibonelo, i-File Transfer Protocol (FTP), i-Red Hat Linux system engineer isisekelo senhlangano. Banobuchule obukhulu bokudlulisela iziphakamiso ezintsha ze-RHEL esikhathini esithile. Izinhlangano zicabanga ngabo njengemithombo yazo eyigugu kakhulu.
Ngale ndlela, khetha namuhla isitifiketi se-Red Hat Linux futhi ube yingcezu yeqembu elinjalo eliphambili.